RASMI: Barcelona Oo Dhameystirtay Saxiixa Miralem Pjanic Iyo Lacagta Waalida Ah Ee Ay Ku Iibsatay | Laacibnet.net
RASMI: Barcelona Oo Dhameystirtay Saxiixa Miralem Pjanic Iyo Lacagta Waalida Ah Ee Ay Ku Iibsatay
June 29, 2020 Balaleti
Ka dib markii la shaaciyay mar sii horeysay in xiddiga khadka dhexe Arthur Melo uu ku biirayo Juventus xilli ciyaareedka soo socda, waxaa haatan si rasmi ah loo shaaciyay in bedelkiisa Miralem Pjanic inuu u wareegayo kooxda Barcelona.
Juventus ayaa Arthur Melo oo da’diisa ay tahay 23 sanno jir waxay ku iibsatay 72 milyan euro iyo 10 milyan euro oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedkiisa.
Laakiin waxay lacagtaas inteeda badan ka heleen iibinta 30 jirka khadka dhexe Miralem Pjanic oo ay Barcelona uga iibiyeen 60 milyan euro oo kaash ah iyo 5 milyan euro oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedkiisa.
Heshiiskaan ciyaaryahan isku bedelashada ayaa ahaa mid si weyn uga careysiiyay jamaahiirta Barcelona kuwaasoo ku doodaya in laga iibsaday xiddig da’ yar islamarkaana loogu soo bedelay xiddig ku dhow gabagabada waayihiisa ciyaareed.
Laakiin maamulka Barcelona ayaa u arka Miralem Pjanic mid waayo aragnimo iyo khibrad ku soo kordhin kara khadkooda dhexe.
Pjanic ayaa la sii joogi doona Juventus inta ka dhiman xilli ciyaareedkan 2019-20 isagoo si rasmi ah Barcelona ugu wareegi doona bilowga xilli ciyaareedka soo socda.
Arthur Melo ayaa isna si la mid ah la sii joogi doona Barcelona inta ka dhiman xilli ciyaareedkan isagoo Juventus u wareegi doona bilowga xilli ciyaareedka cusub.